GỤỌ NKE Albanian Amharic Armenian Bulgarian Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French Georgian German Hiligaynon Hungarian Igbo Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Malayalam Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Setswana Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Thai Turkish Ukrainian
Ndị Na-eto Eto Na-ajụ,
Kanye n’ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na nke ọ bụla n’ime ihe ndị a a kọrọ ebe a emee.
1. Ị nọ n’ime ụlọ ị na-arahụ, mechie ụzọ, ozugbo ahụ nwanne gị agbabata n’ebughị ụzọ kụọ aka.
◯ ‘Nsogbu adịghị . . . ana m emekwa nwanne m ụdị ihe ahụ.’
◯ ‘Nwa a enweghị nsọpụrụ! Ya bụrụkwanụ na m na-eyiri uwe?’
2. Gị na otu enyi gị na-akparịta ụka n’ekwe ntị, mama gị anọrọ n’otu akụkụ, o dokwara anya na ọ na-ege ihe niile unu na-ekwu.
◯ ‘Nsogbu adịghị . . . o nweghị ihe m na-ezo ezo.’
◯ ‘Lekwanụ m nsogbu! Ọ dị m ka a na-enyo ihe ọ bụla m na-eme enyo!’
3. I si esi bata, ozugbo ahụ ndị mụrụ gị amalite ịjụkasị gị ajụjụ ahụ́. “Ebee ka ị gara? Gịnị ka ị gara ime ebe ahụ? Olee ndị gị na ha so gaa?”
◯ ‘Nsogbu adịghị . . . m na-akọrọ ha ihe ọ bụla m na-eme.’
◯ ‘Ụdị ihe a na-ewe m iwe! Ndị mụrụ m atụkwasịdịghị m obi!’
MGBE ị dị obere, o nwere ike o nweghị ihe ị na-ezo ezo. Ọ bụrụ na nwanne gị ị tọrọ agbabata n’ime ụlọ ị na-arahụ n’ebughị ụzọ kụọ aka, iwe anaghị ewe gị. Ndị mụrụ gị jụọ gị ajụjụ, ị naghị egbu oge aza ya. N’oge ahụ, onye ọ bụla ma ihe niile ị na-eme. Ma ugbu a, e nwere oge ndị ị na-anaghị achọ ka mmadụ mara ihe ị na-eme. Otu nwata nwoke dị afọ iri na anọ, aha ya bụ Andru, sịrị: “Ọ na-amasị m ma e nwee ihe ụfọdụ m na-eme ndị ọzọ na-amaghị. *
Gịnịzi mere i ji bido zowe ihe ụfọdụ ezo? Otu ihe kpatara ya bụ na i towela. Dị ka ihe atụ, mgbanwe ndị ị na-enwe n’ahụ́ gị n’ihi na ị ghọwala okorobịa ma ọ bụ agbọghọbịa nwere ike na-eme gị ihere, o nwedịrị ike ime ka ahụ́ ghara irucha gị ala ma gị na ndị ezinụlọ unu nọrọ. Ihe ọzọkwa bụ na ka ị na-etokwu, ị ga na-achọ inwe oge naanị gị ga-anọ tụgharịa uche n’ihe ụfọdụ. Nke a na-egosi na i nwewela “ikike iche echiche,” nke bụ́ àgwà Baịbụl kwuru na onye na-eto eto kwesịrị inwe. (Ilu 1:1, 4; Diuterọnọmi 32:29) Jizọs n’onwe ya gadịrị “n’ebe ndị mmadụ na-adịghị anọkarị” ka ọ nọrọ ebe ahụ tụgharịa uche.—Matiu 14:13.
Nke bụ́ eziokwu bụ na gị na ndị mụrụ gị ka bi, ha kwesịkwara ịma ihe ndị ị na-eme. (Ndị Efesọs 6:1) Ma, ọ bụrụ na ị naghị agwa ha ihe ị na-eme n’ihi na i chere na i towela, gị na ha ga-enwe nsogbu. Olee ihe ị ga-eme ka gị na ha ghara ise okwu? Ka anyị leba anya n’ihe abụọ nwere ike isere unu okwu.
Mgbe Ị Chọrọ Ịnọrọ Onwe Gị
E nwere ọtụtụ ihe nwere ike ime ka ị chọọ ịnọrọ onwe gị. O nwere ike bụrụ na ị chọrọ ‘izurutu ike.’ (Mak 6:31) Ma ọ bụkwanụ ị chọọ ikpe ekpere, i nwere ike ‘ịbanye n’ọnụ ụlọ gị, mechie ọnụ ụzọ gị, kpekuo Nna gị ekpere’ otú ahụ Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha na-eme. (Matiu 6:6; Mak 1:35) Ma nsogbu bụ na ị banye n’ọnụ ụlọ nke gị (ma ọ bụrụ na i nwere ọnụ ụlọ nke gị), mechie ụzọ, o nwere ike ndị mụrụ gị agaghị echewe na ị na-ekpe ekpere! O nwekwara ike ụmụnne gị agaghị aghọta na ị chọghị mmadụ inye gị nsogbu n’oge ahụ.
Ihe I Nwere Ike Ime. Kama gị na ha isewe okwu, mee ihe ndị a.
● Ọ bụrụ na ụmụnne gị anaghị ekwe gị zuru ike, gbalịa gwa ha oge ị na-agaghị achọ ka mmadụ nyewe gị nsogbu. Ya dị mkpa, i nwedịrị ike ịgwa ndị mụrụ gị ka ha nyere gị aka hụ na ụmụnne gị na-eme ihe a ị gwara ha.
● Ọ bụrụ na ndị mụrụ gị na-enyochakarị gị, gbalịa ghọta otú ha si ele ihe anya. Otu nwa agbọghọ dị afọ iri na isii, aha ya bụ Ribeka, sịrị: “Mgbe ụfọdụ, ndị mụrụ m na-achọ ịma ihe ndị m na-eme. Ma nke bụ́ eziokwu bụ na m bụrụ nne nwere nwa dị afọ iri na isii, m ga-emekwa otu ihe ahụ, karịchaa ma m cheta ọtụtụ ọnwụnwa na-abịara ndị na-eto eto n’oge a!” Ì nwere ike ime ka Ribeka, ma gbalịa ghọta ihe mere ndị mụrụ gị ji achọ ịma ihe ndị ị na-eme?—Ilu 19:11.
● Gwa onwe gị eziokwu ka ị na-aza ajụjụ ndị a: ‘Mgbe m nọ n’ọnụ ụlọ nke m gbachie ụzọ, ò nwere otú m si eme nke na-eme ka ndị mụrụ m chewe na e nwere ihe na-adịghị mma m na-eme? Àna m ezokarị ihe ndị m na-eme ezo nke na ndị mụrụ m ga-achọwazi ụzọ ọzọ ha ga-esi amata ihe m na-eme?’ Ya bụrụ na ị naghị ezo ihe ị na-eme ezo, ndị mụrụ gị agaghị na-enyo gị enyo. *
Ihe Ị Ga-eme. N’okpuru ebe a, dee otú i nwere ike isi kwulite nsogbu a mgbe gị na ndị mụrụ gị na-ekwurịta okwu.
Ụdị Ndị Gị na Ha Na-akpa
I topụtawa agbọghọbịa ma ọ bụ okorobịa, ọ dịghị njọ ma i nwee ndị enyi. Ọ dịghịkwa njọ ma ndị mụrụ gị chọọ ịma ndị bụ́ ndị enyi gị nakwa ihe gị na ha na-eme. Ndị mụrụ gị maara nke ọma na ọ bụ ọrụ ha. Ma gịnwa na-ewere ya na ha anaghị atụkwasị mmadụ obi. Otu nwa agbọghọ dị afọ iri na isii aha ya bụ Rut, sịrị: “Ọ naghị amasị m ma ndị mụrụ m jụọ m onye mụ na ya na-ekwu n’ekwe ntị m ma ọ bụ ma ha jụọ m onye ziteere m ozi iimeel m na-agụ.”
Ihe I Nwere Ike Ime. Kama ikwe ka ndị gị na ha na-akpa mee ka ị na-agbara ndị mụrụ gị ọsọ, gbalịa mee ihe ndị a.
● Gwa ndị mụrụ gị ndị bụ́ ndị enyi gị, hụkwa na ha na ha matara. A sị ka e kwuwe, ị gaghị achọ ka ndị mụrụ gị si n’azụ mata ndị enyi gị, ma ha ga-eme otú ahụ ma ọ bụrụ na ị naghị agwa ha ndị bụ́ ndị enyi gị. Chetakwa na ndị mụrụ gị ma na ụdị ndị gị na ha na-akpa ga-emetụta àgwà gị. (1 Ndị Kọrịnt 15:33) Ọ bụrụ na ndị mụrụ gị mata ndị gị na ha na-akpa, ha agaghị na-achọkarị ka ị gwa ha ndị bụ́ ndị enyi gị.
● Jiri nkwanye ùgwù gwa ndị mụrụ gị okwu ya. Agwakwala ha na ha na-etinye ọnụ n’ihe na-agbasaghị ha. Kama, i nwere ike kwuo ihe dị ka, “Ọ na-adị m ka è nwere onye na-anọ n’akụkụ na-ege ihe ọ bụla mụ na ndị enyi m na-ekwu. Ọ na-esiziri m ike mụ na ndị enyi m ịkparịta ihe ọ bụla.” Ọ bụrụ na ị gwa ya ndị mụrụ gị, o nwere ike ime ka ha na-enyetụ gị ohere ma gị na ndị enyi gị na-ekwurịta okwu.—Ilu 16:23.
● Gwa onwe gị eziokwu: Ọ̀ bụ naanị na ị chọghị mmadụ inye gị nsogbu, ka è nwere ihe ị na-ezo ezo? Otu nwa agbọghọ dị afọ iri abụọ na abụọ aha ya bụ Britini kwuru, sị: “Ọ bụrụ na gị na ndị mụrụ gị bi, ya abụrụkwa na o nwere ihe ha na-amachaghị banyere gị, ihe i kwesịrị iche bụ, ‘Ebe ọ bụ na o nweghị ihe ọjọọ m na-eme, o nweghị ihe m kwesịrị izo ezo.’ Ma, ọ bụrụ na o nwere ihe ị na-ezo ezo, mara na o nwere ihe ị na-eme na-adịghị mma.”
Ihe Ị Ga-eme. N’okpuru ebe a, dee ihe i nwere ike ikwu ma ị chọọ ka gị na ndị mụrụ gị kwurịta nsogbu a.
Otú Ị Ga-esi Edozi Nsogbu Gị na Ndị Mụrụ Gị Na-enwe
Ugbu a, ị ga-enwezi ike ịma ihe ị ga-eme ná nsogbu nke ọ bụla gị na ndị mụrụ gị na-enwe ma a bịa n’okwu gbasara izo ihe ụfọdụ ezo.
Nke mbụ: Chọpụta ebe gị na ha na-enwe nsogbu.
Olee ihe gbasara gị ị na-agaghị achọ ka ndị mụrụ gị na-etinyekarị anya na ya?
Nke abụọ: Chọpụta ihe bụ́ ụjọ ha.
Gịnị ka ọ dị gị ka ọ̀ bụ ya bụ ụjọ ndị mụrụ gị?
Nke atọ: Gbalịa dozie nsogbu gị na ha na-enwe.
(a) Gbalịa cheta otu ihe ị na-akpachaghị anya na-eme, nke nwere ike ịbụ ya na-eme ka ndị mụrụ gị na-enyo gị enyo, detuokwa ya n’okpuru ebe a.
(b) Olee ihe ị ga-eme iji kwụsị nsogbu ahụ i chetara?
(ch) Olee ihe ị ga-achọ ka ndị mụrụ gị mee gbasara ihe ndị ahụ ị gwara ha na-ewe gị iwe?
Nke anọ: Gị na ha kwurịta ya.
Gị na ndị mụrụ gị kwurịta ihe ndị a i dere n’oge ga-adabara unu.
^ par. 13 Aha a kpọrọ ụfọdụ ndị n’isiokwu a abụghị ezigbo aha ha.
^ par. 21 Ọ bụrụ na i mechaa ihe ndị a, ya adị gị ka ndị mụrụ gị hà ka na-enyo gị enyo, wetuo obi ma jiri nkwanye ùgwù gwa ha otú obi dị gị. Gee ha nnọọ ntị mgbe ha na-agwa gị ụjọ ha, hụkwa na o nweghị otú gịnwa si eme ka ha nyowa gị enyo.—Jems 1:19.
● Gịnị mere o ji kwesị ekwesị ka ndị mụrụ gị mara ihe ọ bụla ị na-eme?
● Olee otú mbọ ị gbara ịhụ na gị na ndị mụrụ gị kwurịtara nsogbu unu na-enwe ga-esi abara gị uru n’ọdịnihu ma gị na ndị ọzọ torola eto nwee nghọtahie?
“Ọ bụrụ na ndị na-eto eto anaghị ezoro ndị mụrụ ha ihe, ndị mụrụ ha agaghị na-achọkarị ịgụ ozi iimeel na ozi ndị e ziteere ụmụ ha n’ekwe ntị iji mara ihe ndị ha na-eme.”
“Iwe agaghị ewe m ma ndị mụrụ m gụọ ozi iimeel e ziteere m. Ọ bụrụ na ọ bụghị ihe ọjọọ ma onyeisi ọrụ gụọ ozi iimeel e ziteere ndị ọrụ ya, ọ bụghịkwa ihe ọjọọ ma ndị mụrụ ụmụ gụọ ozi iimeel ụmụ ha.”
“Ndị mụrụ gị achọghị ka ihe ọ bụla mee gị, mgbe ụfọdụ o nwere ike ịdị gị ka ha anaghị ekwe gị megharịa ahụ́. Echeghị m na ọ dị mma. Ma nke bụ́ eziokwu bụ na m mụta nwa, enwekwara m ike ime otu ihe ahụ.”
[Igbe dị na peeji nke 23]
● Nwa gị nwoke nọ n’ime ụlọ ọ na-arahụ, mechie ụzọ. Ì kwesịrị ịbata n’ebughị ụzọ kụọ aka?
● Nwa gị nwaanyị chefuru ekwe ntị ya n’ụlọ gawa akwụkwọ. Ọ̀ dị mma ma i were ekwe ntị ahụ, mepee ebe a na-edebe ozi ma gụwa ozi ndị ọzọ ziteere ya?
Ajụjụ ndị a adịghị mfe ọzịza. Ma ọ dịnụ mkpa na ị ga-ama ihe nwa gị na-eto eto na-eme, ọ bụkwa ọrụ gị ịhụ na ọ banyeghị ná nsogbu. I kwesịkwara icheta na ị gaghị anọli ebe niile nwa gị nọ iji hụ na ọ banyeghị ná nsogbu, ị gaghị enwekwa ike ịma ihe niile nwa gị na-eme. Gịnịzi ka ị ga-eme ka ị ghara imefe ihe ókè?
Nke mbụ, cheta na ọ bụrụ na nwa na-eto eto ezochiere ndị mụrụ ya ihe ụfọdụ ọ na-eme, ọ bụghị mgbe niile ka ọ pụtara na o nwere ihe ọjọọ ọ na-eme. Ọtụtụ mgbe, ụdị ihe ahụ na-egosi na nwa ahụ etowela. Izochi ihe ụfọdụ na-enyere ndị na-eto eto aka ịmata ma hà ga-anọli nke onwe ha. Ọ na-enyekwara ha aka iji “ike iche echiche” ha na-echebara nsogbu ndị ha na-enwe echiche. (Ndị Rom 12:1, 2) Izochi ihe ụfọdụ na-enyekwara ndị na-eto eto aka inwe ikike iche echiche, nke bụ́ àgwà dị ezigbo mkpa na ha ga-enwe ma ọ bụrụ na ha ga-abụ ndị toro eto na-eche echiche nke ọma. (1 Ndị Kọrịnt 13:11) Ọ na-enyekwara ha aka ịmụta ibu ụzọ chebara okwu siri ike echiche tupu ha azaghachi.—Ilu 15:28.
Nke abụọ, cheta na ị chọọ ka ọ bụrụ gị ga na-agwa nwa gị ihe ọ bụla ọ ga-eme, o nwere ike ịkpasu ya iwe, meekwa ka o nupụwara gị isi. (Ndị Efesọs 6:4; Ndị Kọlọsi 3:21) Nke a ọ̀ pụtaziri na ị ga-ahapụ ya ka o mewe otú ọ bụla dị ya mma? Mbanụ, ọ bụ gị mụrụ ya. Ihe dị mkpa bụ inyere nwa gị aka ka o nwee akọnuche a zụrụ azụ. (Diuterọnọmi 6:6, 7; Ilu 22:6) N’ikpeazụ, ị ga-achọpụta na inyere nwa gị aka ịzụ akọnuche ya ka mma karịa inyochawa ihe ọ bụla ọ na-eme.
Nke atọ, gị na nwa gị kwurịta ihe bụ́ ụjọ gị. Gee ya ntị mgbe ọ na-ekwu ihe ndị na-ewe ya iwe. Lee ma è nwere mgbanwe ụfọdụ ị ga-eme. (Ndị Filipaị 4:5) Gwa nwa gị na ị gaghị na-enyochakarị ya ma ọ bụrụ na ọ gaghị emenye gị ihere. Gwa ya ntaramahụhụ ị ga-enye ya ma ọ bụrụ na o meghị ihe gị na ya kpebiri, hụkwa na i mere ihe ahụ i kwuru ma ọ daa iwu ahụ. Ka obi sie gị ike na ịhapụ nwa gị na-eto eto ka o nwee ihe ụfọdụ ọ na-anaghị akọrọ gị agaghị eme ka ị ghara ịbụ ezigbo nne ma ọ bụ nna.
Mmadụ ịbụ onye a tụkwasịrị obi dị ka ụgwọ ọnwa a na-akwụ onye ọrụ, ọ bụkwa naanị onye rụrụ ọrụ ka a na-akwụ ya
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Ọ̀ dị njọ izo ihe ụfọdụ ezo?